မေတ္တာဘွဲ့ Archives - Piti Video
“ကျေးလက်သဘာဝအလှအပများ. ..တောသူတောင်သားတို့ရဲ့ ပွင့်လင်းစွာနေထိုင်မှုနှင့် ကျေးရွာဓလေ့အဖြစ်ပျက်များကို ဟာသဆန်ဆန်ရိုက်ကူးထားပြီးဘွန္တောကြက်သူခိုး ဆိုတဲ့အတိုင်း အရုဏ်ဆွမ်းချက်ရန်နှိုးဆော်လိုက်၊ ကြက်တွေခိုးလိုက် နေလာတဲ့ တက်လူ၊ ယောက္ခမ အိမ်က ကြက်ပျောက်တဲ့ချိန်ကစပြီးယောက္ခမရော မိန်းမရော အကောင်းမမြင်ပြောဆိုနေတဲ့အချိန် သားဖြစ်သူကပါ သူ့ဘက်မပါတော့ ဘယ်လိုခံစားရမလဲဆိုတော့… ယောက္ခမ နဲ့ သမက်ကြားကပြဿာနာလေးတွေကိုဘယ်လိုဖော်ကျူးထားမလဲဆိုတာ …”
“မိဘမဲ့ တစ်ကောင်ကြွက် ကပ္ပိယဘဝနဲ့နေလာခဲ့တဲ့ စံလှဘော် မှာတစ်ရွာလုံးရဲ့အချစ်ကိုခံခဲ့ရပြီး မြချစ် လေးကိုတဖက်သတ်ချစ်နေခဲ့ပေမယ့်ပဲပွဲစားလေး အောင်တိုင်းကျော် ကိုအမည်မသိသူတစ်ယောက်ဘယ်လိုချောင်းရိုက်သွားမလဲ … မြချစ် မှာ စံလှဘော် ကိုသံသယဝင်ခဲ့တော့ အမှန်တကယ်ပဲ တရားခံက ကပ္ပိယ စံလှဘော် ဖြစ်မလား … ကပ္ပိယ စံလှဘော် ရဲ့အချစ်ရေးကဘယ်လိုဖြစ်မလဲ …”
“ဦးထက်နောင် မှာအခက်အခဲကြုံတိုင်းအမှတ်မထင်ဆုံကာဖြေရှင်းပေးတတ်တဲ့ စနိုး ကို Lucky Fish အနေနဲ့ ကံကောင်းခြင်းတွေသယ်လာပေးတဲ့အတွက် ဦးထက်နောင် မှာ စနိုး ကိုဘယ်လိုရယူပိုင်ဆိုင်မလဲ…စနိုး မှာငွေကြေးအဆင်မပြေတာကြောင့် ဦးထက်နောင် ရဲ့ရွှေငါးလေးအဖြစ်နေခဲ့ပေမယ့် ချစ်သူ ကျော်ကျော် နဲ့အဆက်မပြတ်တော့ စနိုး ဘာဆက်လုပ်မလဲ…ကျော်ကျော် နဲ့ ဦးထက်နောင် တို့ရဲ့ထင်မှတ်မထားတဲ့ပတ်သတ်မှုကဘာဖြစ်မလဲ….”
“ငွေမုဆိုးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ နေလ မှာစည်းဘောင်အတွင်းကမုဆိုးဖြစ်ပေမယ့် တပည့်ကျော် ရဝိန် တို့နဲ့စီးပွားရှာနေခဲ့ပြီး နေခြည် ဆိုတဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်နေလ ရဲ့ရင်ခုန်သံတွေကိုဘယ်တူးဖေါ်သွားမလဲဆိုတာ…ငွေမုဆိုးပြိုင်ဘက်တွေဖြစ်ကြတဲ့ နေလ နဲ့ အောင်သိုက် တို့မှာအဆင်ပြေပါ့မလား…ငွေမုဆိုး ဘဝထဲကနေနေခြည် ကြောင့်လူမှန်တစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ နေလ မှာသူ့ရဲ့မကောင်းမှုတွေကြောင့်အချစ်ရေးကသာယာနိုင်ပါ့မလားဆိုတာ…”
ဇာတ်ကြမ်း, မေတ္တာဘွဲ့, မှုခင်း
“အကျင့်စရိုက်ခြင်းမတူတဲ့ ပေါ်ဌေး နဲ့ ရင်ငြိမ်း တို့ရဲ့အချစ်ရေးမှာဘယ်လိုများဟာသဆန်နေမလဲ…သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အိမ်ထောင်ရေးမှာအသိသက်သေအနေနဲ့သူငယ်ချင်းများလက်မှတ်ထိုးခဲ့ပေမယ့် ပေါ်ဌေး နဲ့ ရင်ငြိမ်း တို့ရဲ့အိမ်ထောင်ရေးကကောအဆင်ပြေနိုင်ပါ့မလား…အဆင်မပြေရတဲ့အကြောင်းရင်းဘာကြောင့်လဲ…သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ကွာရှင်းစာချုပ်မှာဘယ်သူတွေရဲ့လက်မှတ်လိုအပ်နေမလဲဆိုတာ…”
“လူးလူမျိုးတွေရဲ့ ခေါင်းဆောင် သခင်လူးကဲဖန် ရဲ့ကြင်ယာတော်အဖြစ်ခန့်အပ်ရန်အတွက် လူးလူမျိုးမဟုတ်တဲ့သူကိုရှာပေးဖို့ တာဝန်ရလာတဲ့ ဂျိုဝ မှာလူမျိုးခြားရွှေပွင့် ကိုဖမ်းခေါ်ခဲ့တော့ ရွှေပွင့် တစ်ယောက်ဘာဆက်ဖြစ်မလဲ … လူးသခင်မအဖြစ်တင်မြှောက်ခံရတဲ့ ရွှေပွင့် မှာပျော်ရွှင်နိုင်ပါ့မလား … သခင်ကြီး ကကော ရွှေပွင့် ကိုလက်လွှတ်ဆုံးရှုံးခံနိုင်ပါ့မလားဆိုတာ … ရွှေပွင့် မှာ ခင်ပွန်းသည်ကိုပဲရွေးမလား … လူးလူမျိုးတွေရဲ့သခင်ကြီးကိုရွေးမလားဆိုတာ …”
“သွေးမတော်သားမစပ်တဲ့သမီးနှစ်ယောက်ကိုကံကြမ္မာရဲ့စေခိုင်းမှုအရပြုစုစောင့်ရှောက်ခဲ့ရတဲ့ ဒေါ်အေမီ တစ်ယောက်သမီးအရင်းဖြစ်သူ ဝါဆို နဲ့ငယ်စဉ်ကတည်းကအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ကွဲကွာခဲ့ရတော့ ဒေါ်အေမီ နဲ့ ဝါဆို ပြန်တွေ့နိုင်ပါ့မလားဆိုတာ…ကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့ ဖြူစင် ရဲ့အမေကိုဆေးကုနေတဲ့ဆရာဝန်လေး ကိုရဲမင်းထက် နဲ့ ဖြူစင် တို့သံယောဇဉ်ကဘယ်လိုရှိမလဲ…ဒေါ်အေမီ တို့အိမ်စေမလေး ဖြူစင် ကိုနှိမ်ချဆက်ဆံခဲ့သမျှလရောင်ခြွေလို့ကြွေတဲ့ပန်း ဆိုတာဘယ်သူ့ကိုဖော်ကျူးထားမလဲဆိုတာ…”
“နေ့စားဘဝနဲ့မိခင်နဲ့ညီမလေးကိုလုပ်ကျွေးနေပြီးအမှန်တရားကိုလက်ကိုင်ထားကာ မဟုတ်မခံတတ်တဲ့ ရဲထက် မှာအလုပ်လုပ်ရင်း မတရားအလုပ်မှထုတ်ပယ်ခြင်းခံရတာကြောင့်သူဌေးဖြစ်သူ ဦးသီဇော် နဲ့စကားများကာအလုပ်မှထွက်ခဲ့တာကြောင့် ဦးသီဇော် ရဲ့သမီး ငုဝေသီဇော် မှာ ရဲထက် ကိုမြင်မြင်ချင်းချစ်မိသွားပြီး ရဲထက် ရဲ့မိသားစုကိုကူညီထောက်ပံ့ရင်း ရဲထက် နဲ့ ငုဝေသီဇော် ချစ်သူတွေဖြစ်သွားတာကို ဦးသီဇော် မှသိရှိပြီးသဘောမတူတာကြောင့် ရဲထက် နဲ့ ငုဝေ ဘာဆက်ဖြစ်မလဲ … ရဲထက် မှာ ဦးသီဇော် ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဘာကြောင့်ဖြစ်သွားသလဲ …”
ခါ နဲ့ မိုးစက်မှာ ငယ်သူငယ်ချင်းဖြစ်တာကြောင့် နားလည်မှုအပြည့်နဲ့နေလာခဲ့ပေမယ့် မိုးစက် ရဲ့ဖခင်မှာ အမုန်း ဆိုတဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကို လက်ထပ်လိုက်ရာကအစ.. မိုးစက် မှာ ဆင်းရဲနွမ်းပါးပြီးအူကြောင်ကြောင်နိုင်လွန်းတဲ့ အမုန်း ကိုမိထွေးအဖြစ် ဘယ်လိုလက်ခံရမလဲ …. အမုန်း မှာ မိုးစက် ရဲ့ဖခင်နဲ့လမ်းခွဲပြီး ခါ ကိုချစ်မိခဲ့တော့ အချစ်ဆိုတာသိလိုက်ရတော့ ခါ ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါ့မလား … မိုးစက် ကကော ခါ ကိုအမုန်း နဲ့သဘောတူကြည်ဖြူနိုင်ပါ့မလား ……